कोइराला परिवारमै क्यान्सर किन ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Headline Nepal | २३ कार्तिक २०७३, मंगलवार १३:०९ |
कोइराला परिवारका अन्य केही हस्तीहरुलाई झैं काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई पनि क्यान्सर भएको खबर आएको छ । उनलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको आशँका गरिएको छ । एसीयाली महिलाहरुको सञ्जाल आइक्यापको सम्मेलनमा सहभागी हुन मलेसीया पुगेको बेला रिंगाटा लागेपछि चेकअप गराउँदा चिकित्सकले उनमा क्यान्सरको आशँका गरेका हुन् ।
सुजाताका पिता पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पनि क्यान्सर थियो । काँग्रेसका अर्का नेता पुर्व प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालालाई पनि क्यान्सर रोग लागेको थियो । जिब्रोको क्यान्सरको उपचार गर्न हरेक वर्ष न्यूयोर्कस्थित स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा पुगीरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको फोक्सोमा पनि क्यान्सर भएको पुष्टी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र पुर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रोग एउटै हो । गिरिजाप्रसादलाई पनि शुुसीललाई झैं क्यान्सरका साथै क्रोनीक ब्रोनकाइटीसको समस्या थियो । ब्रोनकाइटीश भएकाले फोक्सोको शल्यक्रिया गर्न नमिलेका कारण शुसीललाई रेडियोथेरापी दिइएको थियो । गिरिजाप्रसादले पनि फोक्सोको शल्यक्रियाको साटो निमोनीयाको उपचार मात्र गरेका थिए ।
गिरिजा प्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनी जिवितै छँदा यो सँवाददाताले कान्तिपुर पब्लीकेशनसको साप्ताहीक प्रकाशन ‘नेपाल’मा आवरण रिपोर्ट लेखेको थियो । त्यसक्रममा कोइरालाको फोक्सोको उपचारमा संलग्न डा. रमेश चोखानीसँग कुराकानी गर्दा उनले कोइरालालाई ‘क्रोनीक पल्मोनरी डिजीज’ ब्रोनकाइटीस भएको बताएका थिए । चेन स्मोकर कोइरालाको चुरोटको अम्मलकै कारण फोक्सोमा क्यान्सर भइसकेको थियो, जसलाई उनको जिवनको उत्तरार्धसम्म गोप्य राखीयो । पछि कोइराला परिवारकै एक सदस्य डा. श्रीहर्ष कोइरालाले यो रहष्य मिडिया सामु खोली दिएका थिए ।
कोइरालाका भतीजा श्रीहर्षका अनुसार सिंगापुरको ग्लीन इगल्स अस्पतालमा परिक्षणकै क्रममा चिकित्सकले गिरिजाप्रसादमा क्यान्सरको आशंका गरेका थिए । चिकित्सकले क्यान्सरकै आशंका फोक्सोको तल्लो भाग काटन खोज्दा कोइरालाले मानेनन । आफ्ना दाईहरुको क्यान्सरको अपरेशन गरेलगत्तै निधन भएकाले कोइराला त्यसबेला निमोनियाको मात्र उपचार गरेर फर्कीएका थिए ।
सुसील कोइरालाको रोगका नियती पनि त्यही रह्यो । उनी स्वयंले चुरोट र सुर्तीको अम्मलका कारण आफुलाई क्यान्सर भएको बताएका थिए । उनलाई पनि ब्रोनकाइटीस भएकाले फोक्सोको शल्यक्रिया गर्नु जोखीमपूर्ण भएको थियो ।
क्यान्सर र कोइराला परिवार
कोइराला परिवारमा क्यान्सर मानौं वंशाणगत रोग झैं भएको छ । यद्यपी चिकित्सकहरुले यसको पुष्टी भने गरेका छैनन । बिपी पुत्र प्रकाश कोइरालाका अनुसार वंशाणुगत भन्दा पनि खानपान शैलीकै कारण क्यान्सर देखिएको हो । हुन पनि कोइराला परिवारका सदस्यहरुको उठबस र खानपान अली राजसी पाराको हुँदै आयो । सत्ताको नजिक पुगेर राजसी ठाँट देखेका कोइराला परिवारका सदस्यले त्यही शैली अपनाए । पंच मकार (मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा र मैथुन) का मामलामा कोइराला परिवारका सदस्य अली उदार नै रहे र छन् ।
जिवनशैली एउटा कारण होला । तर भतीजा डा. श्रीहर्षले यसमा वंशाणुगत कारण नै बताएका थिए । हुन पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी आमा दिव्या कोइरालाका सन्तान सबैको क्यान्सरकै कारण निधन भयो । दिव्या कृष्णप्रसाद कोइरालाकी कान्छी पत्नी हुन । दिव्याको कोखबाट जन्मीएका बिपी कोईराला, केशव कोइराला र तारीणी कोइरालाको मुत्यु क्यान्सरकै कारण भएको थियो । तारीणीकी कान्छी छोरी कल्पनाको पनि क्यान्सरबाटै निधन भएको हो । विपीकी नातीनी मनीषालाई पनि क्यान्सर भयो, जसलाई उनले जितिसकेकी छन् ।
उता कृष्णप्रसादकी माइली पत्नी धादीङकी मोहनकुमारीका सन्तानको भने मश्तीष्क रोगबाट मृत्यु भएको थियो । मातृकाप्रसाद कोइराला र उनका दुई छोरा विमल र सञ्जयको मृत्यु मश्तीष्क रोगबाट भयो । मोहनकुमारीकी नातीनी शैलजाको पनी मश्तीष्क रोगबाटै निधन भएको हो । यद्यपी कोइरालाका निजी चिकित्सक जगदीश अग्रवालले भने वंशाणुगत कारणबाट दिव्याका सन्तानमा क्यान्सर देखा परेको डा. श्रीहर्षको दावीको भने खण्डन गरेका थिए ।
बिपी पुत्र सजग
विपी पुत्र प्रकाश कोईरालो भने आफुलाई क्यान्सर नहोस् भनेर सजगता अपनाइरहेका छन् । अन्र्तवार्ता लिन महाराजगञ्ज, लोहसालस्थित उनको निवासमा पुग्दा प्रकाश ग्रिन टिको चुस्की लगाईरहेका थिए । कोइराला परिवारका चर्चित हस्तीहरुको निधन क्यान्सर रोगबाट भएको र आफ्नी पुत्री मनिषा कोइरालालाई पनि क्यान्सर लागेको देखेका प्रकाशले आफुले अचेल खानपीनमा सुधार ल्याएको बताए । उनी सकेसम्म हर्बल प्रडक्ट प्रयोग गर्छन् । जंक फुड खासै खादैनन् ।
छोरीको उपचारका लागि नौ महिनासम्म अमेरीकाको न्यूयोर्क बसाइका क्रममा प्रकाशले एन्ड्रयू वीलको ‘नेचुरल हेल्थ, नेचुरल मेडिसिन’सम्बन्धी पुस्तक पढने मौका पाए । न्यूयोर्कस्थित स्लोन केटरिङ क्यान्सर सेन्टरका चिकित्सकबाट क्यान्सर लाग्ने कारण र त्यसका असरबारे धेरै जानकारी पाए । अनी त उनले मदिरा कम गरे । पान पराग छाडे । कहिलेकाँही निकोटन लेस चुरोट पिउँछन् । विहान घर कम्पाउण्डमै जगीङ गर्छन् ।
गत वर्ष मनिषाको क्यान्सर उपचारबारे अन्र्तवार्ता लिन जाँदा नै उनले आफ्नो जिवनशैलीलाई केही हदसम्म बदलेको देखिन्थ्यो । उनले भनेका थिए, ‘मनीषाले पनि अब एन्ड्रयू वीलले मार्गदर्शन गरेको जिवनशैली अपनाउन थालेकी छन् । खानपीनमा सुधार ल्याउने हो भने क्यान्सरबाट पनि बच्न सकिन्छ ।’ पाठेघरको क्यान्सरको उपचारपछि पुर्णरुपमा निको भएकी मनिषा अचेल मुम्बईमा रहे पनि त्यहाँको ग्यामरस र भिडभाडयुक्त संसारबाट अलग एउटा शान्त र सात्वीक जिवन बिताइरहेको प्रकाशले बताए । ‘खानपीनमा सुधार ल्याएर मनीषाले क्यान्सरलाई जितिन’,प्रकाशले भने, ‘उनी एकमहिनापछि नेपाल आउँदैछीन् ।’
सुजाताले पनि अब त्यस्तै सात्वीक र शान्त जिवनशैली अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । यदि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको हो भने पनि उचीत उपचार र जीवनशैलीमा सुधार गर्न सकेमा क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ । त्यसका लागि ‘सुजाता दिज्जु’मा दृढ आत्मविश्वासको खाँचो छ ।
Previousपाल्पामा नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या बढ्यो
Nextउड्दै गरेको एरोमेक्सिकोको जहाजमा सर्प (भिडियो सहित)
भारु सटहीमा नेपालको पटक-पटकको अनुरोध खेर गयो ! भारतले चासो दिएन
१८ पुष २०७३, सोमबार १५:४१
चितवनमा हर्न बजाउने १७२ जना कारबाहीमा
११ भाद्र २०७४, आईतवार १३:०३
पाँचथरको सराङडाँडा नेपालकौ छैटौ बालमैत्री स्थानिय शासनयुक्त गाविस घोषणा
२८ माघ २०७३, शुक्रबार १६:३१
एसिया कप ट्वेन्टी–ट्वेन्टी महिला क्रिकेटमा नेपालले सोमबार श्रीलंकासँग खेल्दै ! कसको भागमा पर्ला जित ?
१३ मंसिर २०७३, सोमबार ०९:१४